Hatramin'ny nisian'ny MID na ny tsenan'ny vola vahiny, izay mitsingevaheva arakaraky ny vola Dollar sy Euro, dia misy ihany koa ny Finex na ny Service de la Finance Extérieure mba hikarakarana ny vola vahiny, ny famerenana ny vola vahiny, fividianana vola vahiny, ny petra-bola sy ny Renivola vahin'ny Orinasa, ny fitrosana vola vahiny.
Ny vola ariary na MGA tokoa manko, dia mitsingevana arakaraky ny filana vola vahiny, ho an'ireo mpanafatra entana, na ny famarotana ny vola vahiny ho an'ireo avy namarotra entana ka ampody ny volany eto Madagasikara.
Samihafa ny sandan'ny vola vahiny raha hividy izany ireo mpanafatra entana, sy ny sandan'ny vola vahiny raha amerina ny vola.
Ny elanelan'izay, na ny perte de change, dia ny banky sy ireo mpisera vola vahiny, bureau de change, no mahazo tombony amin'izany.
Inona moa ny tanjona :
Tokony ny entana ahondrana no betsaka noho ny entana afarana, amin'izay vitsy kokoa ny filana vola vahiny hividianana entana any ivelany.
Tsy arak'izay anefa ny zava-misy eto amintsika, satria tsy misy ny indostria, sy ireo famokarana ny entana rehetra ilain'ny mponina andavan'andro, ka any ka ny 90% n'ny entana ilaina, dia afarana any ivelany avokoa.
Anisan'ny mandany vola vahiny lehibe indrindra, ny fanarafarana solika, izay mitana ny antsasaky ny filàna. Ny fanafarana fanafody, ny vary, zezika, menaka, PPN, ny fitaovana fanaovan-trano sy lalana, vy, ciment, tôle, ny fanafarana fiarakodia, moto sy ny pièce kojakoja, fanafarana akora sy fitaovam-pamokarana, fripperie, olona ivoaka any ivelany.
Ny mampiditra vola vahiny kosa dia ny fanondranana Vanille, vatosoa, volamena, ny Nickel sy fasimainty, litchi, café, jirofo, cacao, crevette, trondro, hazo, bois de rose...
Be loatra anefa ny elanelan'ny sandan'ny vola vahiny vidiana (Achat), sy ny amidy (Vente), dia matiantoka ireo mividy na mivarotra vola vahiny.
Na eo aza ny ezaka anaovana ny fanamaivanana ny taratasy ilaina amin'izany, dia mbola vesatra lehibe, satria na vola kely alefa amin'ny mpianatra mianatra any an-dafy aza, dia taratasy maro sy fangatahana ela be vao azo.
Raha nanao asa any ivelany, dia efa gidragidra ny mahazo ny karama izay vola vahiny no andoavana izany.
Na dia manana compte en devise aza ilay olona, dia fotoana fohy ihany no ananany dia tsy maintsy averina sy avadika vola MGA ny vola vahiny. Tsy azony atao izany no mitahiry ny vola vahiny eo aminy raha mikasa ny mbola ampiasa iny any ivelany izy, fa mody sy mivadika vola Malagasy avokoa aloha, dia miverina mangataka vola vahiny indray, ary dia tonga indray ilay perte de change, na fatiantoka tamin'ny famadihana ilay vola.
Ny Banky izay vahiny avokoa no mahita tombony amin'io MID sy flotement devise io.
Iarahan'ny rehetra mahita, fa feno mpanakalo vola vahiny etsy amoron-dalana Analakely, etsy amin'ny Hotel de ville, Tsaralalàna, Antsahavola, eny amin'ireny fivarotana karana lehibe ireny, eny amin'ireny mpivarotra électronique ireny, na any amin'ny Faritra.
Manao masobe tsy mahita anefa ny FINEX amin'ireny.
Ireo mpanafatra fiara, na mpanafatra PPN sy Ciment ary vy sy fanafody dia mifanaraka amin'ireo mpanondrana vanille na volamena, ka izay vola vahiny azo any ivelany, izay tsy maintsy entina mody anakaramana ny mpiasa sy hitohizan'ny fividianana vanille na volamena, dia mifanaraka amin'ny sandany tsy ahafatiantoka ny andaniny sy ankilany.
Mazava ho azy fa miala maina eo ny Banky satria tsy mahazo ilay antombony amin'ny différence de change.
Ny lalàna moa dia manome vahana ireo Banky, ka dia mora amin'ny FINEX no milaza fa tsy nampody vola vahiny ireo mpanao vanille na ireo mpanao volamena, ka dia rehefa taitra ny lohany dia ampiarina ny sazy, samborina ary gadraina ireo mpandraharaha, izay nahaloa ny hetra sy haba rehetra, satria hoe tsy nandalo tamin'ny Banky, fa nanao fifampiraharahana amin'ny sisiny.
Ankehitriny, mikatso ireo mpanafatra fiara sy pièce ary ciment, ka dia voatery mividy lafo vola vahiny amin'ny Banky, dia mazava ho azy mampiakatra ny vidin'entana rehetra, na PPN io na ciment, vy...
Ny lalàna dia mamaritra fa tsy afaka mangataka fampodiana vola vahiny vaovao amin'ny FINEX ny mpandraharaha iray raha tsy efa nody ny vola teo aloha. Mahagaga anefa an-taonany no neken'ny Finex ireo mpanao vanille sy volamena ampiditra sy amoaka ny vola vahiny, fa ankehitriny dia izy ihany no mana-pakevitra ny mety sy tsy mety, ny ho samborina sy ny tsy ho samborina, izay ny PAC na ny fitsarana manokana momba ny kolikoly no fitaovana ampiasaina anenjehana ireo mpandraharaha malagasy.
Ka hatramin'izay ve izany kolikoly no nanjaka tao?
Raha mbola mipetraka ny MID, dia ny Banky vahiny hatrany no mahita tombony, ary tsy hitsahatra hiakatra ny vidin'ny vola vahiny satria be ny filàna, ary hitotongana hatrany ny vola malagasy.
Hatramin'ny nametrahana ny MID, dia nitotongana avo 10 heny ny sandan'ny vola malagasy, ary tsy nisy fiatsarana mihitsy, fa miakatra hatrany ny sandan'ny Euro sy Dollar.
Nahatratra 3700 avo heny ankehitriny ny sandan'ny Dollar amin'ny vola malagasy, raha oharina tamin'ny nahazoana ny fahaleovan-tena.
Oviana isika vao ho tonga saina fa io no mamotika ny toe-karena malagasy, ary mametraka izany eo ambany vahohan'ny vahiny vitsy an'isa, izay mitazona ny banky eto amintsika, iza anefa ny Malagasy mba mahazo trosa azo amoronana indostria na orinasa vaventy amin'ny banky eto an-toerana, nahoana no tafakatra hatrany amin'ny 20-30% ny zana-bola alaina, aiza ny Banky Foibe amin'ny fanaraha-maso izany, nefa izy no mametra ny tahan'ny zana-bola azo alaina?
Aoka izay ny fenenjehana ireo mpandraharaha malagasy, aleo hanan-karena ny tanora sy ny orinasa Malagasy, fa tsy anaovana ampihimamba miaraka amin'ireo mpandraharaha vitsy akaiky fanjakana hatrany.
(Sary : Nalaina tao amin'ny Historique de la politique monétaire à Madagascar,